UMTHETHO ISayensi Ukuqiqa Uncedo
Akukho mntu wathi bekuya kuba lula. Icandelo le- ACT Science Reasoning isifundo esizaliswe ngazo zonke iindidi zeemibuzo ezivela kwimingeni ibe ngumngeni onzima, kwaye kunengqiqo ukufumana ambalwa UMthetho weNzululwazi ukutyhila umkhono wakho nokuba uqala ukuvavanya okokuqala okanye uthabatha kumzamo wesibini (okanye wesithathu!). Nazi ezinye ezimbalwa zezo MTHETHO zenzululwazi ze-Science ukuqinisekisa ukuba ufumana amanqaku angcono kakhulu.
Izicwangciso ezingakumbi zokuphucula umgangatho wakho we-ACT
UMTHETHO WESayensi Inkohliso # 1: Funda Iimpawu zeDatha zokuQala kuqala
Isizathu: Ngomvavanyo weSayensi weSizathu sokuHlola, uza kubona iintlobo ezahlukeneyo zeedatshana: UkuBelwa kweDatha, iiNkcazo zokuBambisana, kunye noPhando lweeNgxelo. Iimpawu zenkcazelo eziyimfuneko zilula kuba zibandakanya inani elincinane lokufunda. Bakubuza ukuba uguqule iitafile zokudibanisa, ulandelelanise imifanekiso, kwaye uhlaziye ezinye imifanekiso kunye namanani. Kwezinye iimeko, ungaya ngqo kumbuzo wokuqala we-DR uze uphendule ngokuchanekileyo ngaphandle kokufunda nayiphi na into echazayo. Unokuthi ubhekisele kwitshati enye! Ngoko kunengqiqo ukufumana amanqaku amaninzi njengokuba kunokwenzeka ngaphandle kwesango ngokuphendula loo mibuzo kuqala ngaphambi kokungena kwiiNkcazo eziPhathelene neNkcazo okanye iimpcazo zoPhando.
Isikhumbuzi Esixhasayo: Uya kukwazi ukuba yifayili yokuBaluleka kwedata xa ubona imifanekiso emininzi emikhulu njengetshathi, iitafile, imifanekiso, kunye negrafu. Ukuba ubona ukufunda okuningi kwifomathi yomhlathi, awufundanga i-DR engqinelanayo!
UMTHETHO WESayensi Inkohliso # 2: Sebenzisa i-Shorthand Notes KwiSigcaziso sokuBambisana
DNY59 / Getty Izithombe
Isizathu: Enye yeendinyana ozibonayo kuMvavanyo weSayensi yeSizathu sokuvavanya kuya kuqukwa iindidi ezimbini okanye ezintathu zithatha ingcamango enye kwi-physics, i-science yesayensi, i-biology, okanye i-chemistry. Umsebenzi wakho uza kuba ukutolika inkolelo nganye ukufumana iinqununu zayo kunye nokufumana ukufana kunye nokwahlukana phakathi kwezi zibini. Oku kunzima ukwenza, ingakumbi xa iingcamango ziba malunga ne-radioactivity okanye i- thermodynamics . Isigama siqala ukudideka. Ngoko ke, sebenzisa i-ACT Science inkohliso! Ukunene xa uqala ukufunda, yenza amanqaku ngolwimi olucacileyo kwicala lomhlathi. Gqithisa isisombululo ngasinye somgaqo-siseko. Yenza uludwe lwezinto eziphambili nganye. Uludwe lweenkqubo eziyinkqubo ngokukhawuleza kunye neentoloko ezibonisa ubunzima. Ngeke uhlaselwe ngolwimi xa ushwankathela xa uhamba.
Isikhumbuzo Esixhasayo: Ekubeni iNgqungquthela yokuBambisana iqulethe imibuzo e-7 ngokumalunga noPhando lweeNgxelo ezi-sixthandathu, gcwalisa eli nqanaba emva kokuphawula kweData. Uyakufumana ithuba eliphezulu lamaphupha (7 vs. 6) kunye nale setethi yedatha.
UMTHETHO Wenzululwazi Inkohliso # 3: Ulwazi oluphambanayo Awuyidingi
Getty Images | Chris Windsor
I-Rationalale: Ababhali be-ACT Test ngezinye izikhathi baquka ulwazi olungadingekile lokusombulula nayiphi na imibuzo. Ngokomzekelo, kwiingcamango ezininzi zoPhando, apho kukho izilingo ezimbini okanye ezintathu zokuqwalasela, ezinye zeenkcukacha ngaphakathi kwetafile, iitshathi okanye iirafu aziyi kusetyenziswa nonke. Unokuba nemibuzo emihlanu malunga nobhontshisi wekhofi # 1, kwaye akukho nanye malunga nekhotyi yekhofi # 2. Ukuba ufumana yonke idatha yebhontshisi yekhofi ididekile, zikhululeke ukuwela kwiindawo ezingasetshenziswanga!
Isikhumbuzo Esixhasayo: Kunokuba luncedo ukubhala isivakalisi esichaza isisiseko esisisiseko senzame nganye, ngakumbi ukuba kunzima. Ngaloo ndlela, awuyi kuphinda ufunde kwakhona ivesi ukuze ufunde oko kwenzekayo ngexesha ngalinye.
UMTHETHO WESayensi Inkohliso # 4: Qaphela i-Numeri
Getty Images | Umthombo wesithombe
Isisombululo: Nangona akusiyo uvavanyo lweMathematika ye-ACT, uya kulindeleka ukuba usebenze kunye namanani kwi-Science Reasoning exam, yingakho le MSEBENZI yeCandelo leSayensi ibalulekileyo. Ngokuqhelekileyo, uvavanyo okanye uphando luya kuchazwa ngamanani kwitafile okanye igrafu, kwaye ezo manani zingachazwa kwiimitha-mitha kwelinye itafile kunye neemitha kwenye. Ukuba ubaleka ngamangqitha ngamamitha, ungase ube yingxaki enkulu. Nika ingqalelo kwezo zifinyezo.
Isikhumbuzi Esinceda: Khangela utshintsho oluninzi lwamanani okanye ulwahluko kwiibhile okanye kwiitshathi. Ukuba iiveki 1, 2, kunye ne-3 zinamanani afanayo, kodwa amanani eveki e-4 aphepheni, unokungakholelwa ukuba kuya kuba nombuzo ocela ingcaciso yenguqu.
UMTHETHO Wezesayensi Iinkcazo
Getty Images | Glenn Beanland
Ukufumana umGaqo we-ACT umlinganiselo oyifunayo awunzima njengoko kubonakala. Akudingeki ube yintsimi yesayensi edibanisa kwimimeteorology yokukhaba ukuze ufumane amanqaku kuma-20s aphezulu okanye kwi-30 kule mviwo. Uyakufuna nje ukubeka ingqalelo kwiinkcukacha, jonga ixesha lakho ukuze ungasemva, kwaye usebenzise, ​​usebenzise, ​​usebenzise ngaphambi kokuvavanya kwakho. Umnqweno omhle
I-8 I-Best Best Books Prep Books zokuthenga ngo-2018
I-Most Records engapheliyo kwiiRekhodi zeBhola
Iimpawu eziphambili ze-Watercolor Paint
"Win wir wieder gut" Iingoma kunye nesiNgesi
Amafilimu ka Katharine Hepburn-Spencer Tracy
Ngaba i-Paintball Iibhobho zokubhoboza iimabula?